SINOPEC ရေနံကုမ္ပဏီကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီး ဆီနိုပက် (SINOPEC) တရုတ် ရေနံကုမ္ပဏီရဲ့ စည်းကမ်းမဲ့ မိုင်းခွဲမှုတွေ အပါအ၀င် ရေနံ စူးစမ်းရှာဖွေရေးကြောင့် မကွေးတိုင်းအတွင်းက မြိုနယ် (၄) ခုလောက်မှာ မြေပြိုမှု၊ လယ်ယာမြေနဲ့ သစ်တောတွေ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အခြေအနေတွေ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ပေါ်ပေါက်နေတယ်လို့ မကွေးမြို့ အခြေစိုက် မြစ်ကွေ့ဧရာ လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့က RFA ကို ဒီကနေ့ ပြောပါတယ်။
မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း (MOGE)နှင့် ပူးပေါင်းပြီး မကွေးတိုင်းအတွင်း ရေနံ ရှာဖွေနေသော ဆီနိုပက်ကုမ္ပဏီ၏ ရေနံတွင်းတူးစင်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
Photo courtesy of SINOPEC WEEKLY
ဆီနိုပက်ကုမ္ပဏီဟာ မြန်မာအစိုးရပိုင် (MOGE) မြန်မာ့ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး မကွေးတိုင်းအတွင်းက ဂန့်ဂေါ၊ ထီးလင်း၊ ဆော၊ ပေါက်နဲ့ မြိုင်မြို့နယ်တွေမှာ ရေနံ ရှာဖွေနေရာမှာ ပုံတောင်ပုံညာ တောင်တန်းရဲ့ တဖက်တချက်မှာရှိတဲ့ ပေါက်မြို့နယ်၊ မြိုင်မြို့နယ်၊ ဆောနဲ့ ထီးလင်းမြို့တွေမှာ မနှစ်ကစလို့ မြေပြိုမှုဒဏ်ကို အဆိုးဝါးဆုံး ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ မြစ်ကွေ့ဧရာ လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်ကျော်ကျော်က ပြောပါတယ်။
Dear Our Burmese Leaders,
The SPDC and MOGE are selling all the lands and deposit of oil with very low standard term and condition to all Foreign
Oil Companies for them and their supporters.
Onshore and Offshore Blocks were nearly sold out for next 30 years. The gas Deposit becoming about 300 years for one deposit and now they selling with low cost and for their 30 years life.
So, we must PROTECT our natural resources and land by our PUBLIC.
The most important is the - TO GET THE INCOME BILLION_BILLION GAS SELLING MONEY and Revenue and income.
SPDC is using for them and Burma have no money.
So, we have to ASK the income since 1995 to 2012 statement and Bank's account.
They will destroy all Natural resources and we MUST FIGHT them each way and each
location by PUBLIC.
"WE MUST PROTECT OUR LAND AND NATURAL RESOURCES."
Sep 11, 2012 09:43 AM